King Choice စစ်တမ်းအရ 2020 ခုနှစ်အတွက် ရုပ်ရည်အချောမောဆုံး အနုပညာရှင်များ | News Bar Myanmar
King Choice စစ်တမ်းအရ 2020 ခုနှစ်အတွက် ရုပ်ရည်အချောမောဆုံး အနုပညာရှင်များ
မဲပေးသူတွေအနေနဲ့ နေ့စဉ် တစ်နာရီခြားတစ်ခါ upvote2ခု downvote 1 ခုပေးခွင့်ရှိတာပါ။ နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုတော့ ပရိတ်သတ်က အားကြိုးမာန်တက်ပါဝင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ upvote အများဆုံး အစဉ်လိုက်အတိုင်း 100 Most Handsome Men in the World 2020 အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ ဒီစာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် အယောက် 100 ထဲက ထိပ်ဆုံး အယောက် 20 ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
19. Park Chanyeol
15. Ji Chanwook
11. Cha Eunwoo
9. Varchirawit Chivaaree
7. Kim Taehyun
ဒါကတော့ ကမ္ဘာ့အချောဆုံး အမျိုးသားအယောက်တစ်ရာထဲက ထိပ်ဆုံးအယောက် 20 ကိုကောက်နုတ်ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ရဲ့ မဲပေးမှုတစ်ခုတည်းပေါ်မှာမူတည်ပြီး ရွေးချယ်ထားပေမယ့် စာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေဟာ အားလုံးကလက်ခံထားကြတဲ့ အခန့်ညားအချောမောဆုံး အမျိုးသားတွေဆိုတာတော့ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ နှင်းဆီခိုင်လေး Xiao Zhan ကတော့ 2020 ရဲ့ အချောမောအခန့်ညားဆုံး အမျိုးသားစာရင်းတိုင်းမှာ ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုလည်း King Choice ရဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာကို သိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်ပါပြီ။
Next ၂၀၂၀ အတွက် ကမ္ဘာ့အချောဆုံး အယောက် ၁၀၀ စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့ကြတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားမင်းသားချောများ »
Previous « အချောဆုံးစာရင်းရဲ့ရလဒ်မှာ ထိပ်ဆုံးနေရာတွေကို သိမ်းပိုက်ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသားနာမည်ကျော်များ